စကားနွမ်း - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on January 22, 2013 at 16:19 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
“မြင်ပါများတော့ငယ် နမ်းပါများတော့ပြယ်”တဲ့။ တစ်ခုခုကို အကြိမ်ကြိမ် မြင်ရကြားရသိရတာများ လာတဲ့အခါ ရိုးအီသွားတတ်တာလူ့သဘာဝပင်ဖြစ်သည်။ စာပေလင်္ကာဆိုသည်မှာ ရသမြောက်အောင် သက်ရှိသက်မဲ့တို့နှင့် ခှိုင်းနှိုင်းသည်။ တင်စားသည်။ ကိုယ့်ချစ်သူ့မျက်နှာကို လမင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ် ဖွဲ့နွဲ့လာခဲ့တာ ဦးပုညတို့ကနေ ၀ိုင်ဝိုင်းတို့ခေတ်အထိမရိုးနိုင်သေး။ နောင်လည်းဆက်လက်ဖွဲ့နွဲ့ ကြဦးမည်ပင်။ သို့ရာတွင် အသုံးတစ်ခုတည်းကို ထပ်တလဲလဲသုံးပါက ရနံ့ပျယ်သည့်ပန်းလိုနွမ်းနယ် သွားပေလိမ့်မည်။
အင်္ဂလိပ်စကားတွင် ပြင်သစ်ဘာသာမှ မွေးစားထားသည့်စကားလုံး cliché /ˈkliːʃeɪ/ (ကလီရှေး)ဆိုသည်မှာ ထိုကဲ့သို့ အသုံးအနှုန်းများ၊ စကားလုံးများကို ရည်ညွှန်းသည့်စကားလုံး ဖြစ်သည်။ သူနှင့်အဓိပ္ပါယ်တူသည့် နောက် စကားလုံးတစ်ခုက trite ဖြစ်သည်။ မြန်မာလိုဆိုရလျှင် “ဖန်တရာတေ”၊ “မွဲပြာပုဆိုး”၊ “ဆီသည်မလက်သုတ်” ကဲ့သို့ ဟုပြောရမည်။ ဤမြန်မာစကားလုံးများ ကိုယ်၌ကပင် စကားနွမ်း များဖြစ်နေပေပြီ။
ယနေ့ခေတ် cliché ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားသောအသုံးအနှုန်းများသည် မူလစသုံးစဉ်ကတော့ ပြောင်မြောက်သော၊ လှပသော၊ ခွန်အားရှိသော စကားလုံးများဖြစ်ကြသည်။ သို့ရာတွင် သူသူငှာငှာ ၀ိုင်း၍ သုံးဖန်များလာသည့်အခါ မူလဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပါယ်နှင့်ခွန်အားတို့ မပီမပြင်ဖြစ်လာ သည်။ အလှအပများပျယ်လွင့်သွားသည်။ “အပ်ကြောင်းထပ်သည်”၊ “ဓါတ်ပြားဟောင်းကြီးဖွင့်သည်” စသည့်စကားလုံးများ၏ခွန်အားကို ဓါတ်ပြားဖွင့်စက်မမြင်ဘူးသည့် ယနေ့ခေတ်လူငယ်တို့ မခံစားနိုင်တော့။ “ငြီးငွေ့စရာကောင်းလောက်အောင်ပြောသည်” ဆိုသည့်အဓိပ္ပါယ်ကိုသာ နားလည်နိုင်တော့သည်။
ဆရာ့ဆရာတို့က formal အရေးအသား၊ အပြောအဆိုတွေမှာ cliché များကိုရှောင်သင့်သည်ဟု လမ်းညွှန်ကြသည်။ အကြောင်းရင်းက သူတို့သည် ဖတ်သူ၊ ကြားရသူတို့အတွက် ငြီးငွေ့စရာ ကောင်းသည်။ စာရေးသူ၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမရှိ၊ အပျင်းကြီးရာရောက်သည်။ မြန်မာစကားတွင် ဘယ်စကားလုံးကနွမ်းသည်။ ဘယ်စကားလုံးကတော့မနွမ်းသေးဟု တရားဝင်စာရင်းပြုစုသတ်မှတ် ထားခြင်းရှိမရှိတော့ ကျွန်တော်မသိသေးပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားတွင်တော့ အဘိဓါန်များက cliché ဖြစ်သည့်စကားလုံး၊ အသုံးများကိုသတ်မှတ်ထားပါသည်။ cliché ကိုရှောင်ဆိုရာတွင် ဖွဲ့နွဲ့ပြောဆိုခြင်း၊ တင်စားခြင်းကိုရှောင်ရမည်မဟုတ်။ သူ့ကိုအခြေခံကာတီထွင်းဆန်းသစ်နိုင်ပါသည်။ “အသည်းကြားကမဲတစ်ပြား” ဟု လူတိုင်းသုံးနေချိန် “နှလုံးသားထဲကအမှန်ခြစ်တစ်ခု” ဟုကိုယ်ကသုံးနိုင်ပါသည်။ The apple of my eye ကို The apple of my joy, The fruit of my appreciation စသည်လိုဥာဏ်ရှိသရွေ့တီထွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်သောအင်္ဂလိပ်စာကိုရေးရာတွင် cliché မှန်းမသိဘဲသုံးစွဲမိတတ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် မိမိအရေးအသားဟာ cliché ဟုတ်မဟုတ် အရင်စစ်ဆေးကြည့်ရပါမည်။ cliché ဖြစ်ကြောင်းသိပြီဆိုပါက အောက်ပါနည်းလမ်းသုံးခု အတိုင်းပြန်ရေးကြည့်နိုင်ပါသည်။
(၁) ကိုယ်သုံးထားသည့် cliché ၏ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ key word တွေကိုခြေရာခံမိလျှင် အဓိပ္ပါယ်တူရာနှင့်အစားထိုးသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ apple à fruit, my eye à focus, appreciation။ ဆိုလိုရင်းကိုနားမလည်လျှင်တော့ အဘိဓါန်ကိုသာအားပြုရပါတော့မည်။
(၂) ဒီအသုံးကို ကိုယ်တစ်ကယ်သုံးဖို့လိုအပ်၊မလိုအပ် သေချာဆုံးဖြတ်ပါ။ cliché အများစုဟာဝေ့ကာဝိုက်ကာဖွဲ့နွဲ့ထားတာများပါတယ်။ စကားလုံးများခြင်းဟာ အရေးအသားဖောင်းပွစေတာကလွဲ၍ စာအရည်အသွေးကို သိပ်အထောက်အကူမပြုပါဘူး။ မလိုလျှင်မသုံးပါနှင့်။
(၃) ပြန်ပြင်ရေးပါ။ အောက်မှာ cliché တွေကိုပြန်ပြင်ရေးပုံအဓိပ္ပါယ်၊ နမူနာနဲ့တကွ မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ အမြည်းမျှသာဖြစ်ပါသည်။ ပိုပြီးပြည့်စုံသည့် စာရင်းလိုချင်ရင်တော့ အင်တာနက်မှာသာရှာယူပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
The apple of my eye - မျက်ရှု၊ အရေးအပေးဆုံးသူ၊ အချစ်ဆုံးသူ
Meaning: The focus of my eye; someone or something cherished above others.
Example: Of all the young ladies at the dance, I couldn't take my eye off of her. She was the apple of my eye.
The red delicious of my eye
The apple of my joy
The fruit of my appreciation
The joy of my focus
Any port inastorm - ကောက်ရိုးတစ်မျှင်၊ အကူအညီလိုချိန်မှာ ဘယ်လိုအကူအညီမျိုးဖြစ်ဖြစ်ရယူသည်။
Meaning: help accepted from any source
Example: Another night with the in-laws beats an overnight at the airport - any port inastorm!
any harbor inagale
any shelter inablizzard
any inside when the outside gets wild
Achilles’ heel - အားနည်းချက်
Meaning: vulnerability (definition and example).
Example: His lack of attention to detail was his Achilles’ heel.
Achilles’ weak spot
All that glitters is not gold - ၀ါဝါမြင်တိုင်းရွှေမထင်နဲ့
Meaning: A proverb: All that appears expensive and genuine isn't so.
Example: That minted coin looks likeagood deal, but all that glitters is not gold.
all that sparkles is not diamonds
all that shines is not silver
gold and brass glitter alike
All ears နားစွင့်ထားသည်
Meaning: eagerly listening (definition).
Examples: Speak up, I'm all ears.
listening with both ears
eardrums are piqued
ears are tuned
After my own heart - စိတ်တူကိုယ်တူ
Meaning: Someone who thinks as I do
Example: Comparing favorite movies, I found she wasawoman after my own heart.
shares my heartbeat
whose pulse beats with mine
has similar vibes
Ants in his pants - မြောက်မီးခဲကိုင်မိသလို။ ဘောင်းဘီထဲပုရွက်ဆိတ်ရောက်
Meaning: The inability to sit quietly and without moving around.
What’s the matter with you, always fidgeting—you got ants in your pants?
an itch on his spine
Rewrite 3:ascorpion in his shoe
Dirt cheap - ချီးပေါသေးပေါ၊ အရမ်းဈေးပေါသော
Meaning: A very low price. Inexpensive.
Example: The auctioneers let us have the stuff dirt cheap.
cheap as muck
A fast buck လွယ်လွယ်ရသည့်ငွေ
Meaning: easy money, often illegally gained
Example: Itinerant traders out to makeafast buck.
a fast dollar
a quick nickel
နမူနာများထဲမှအများစုဟာ cliche-a-day.blogspot.com တွင် Alan Eggleston ရေးသားထားသော how to slayacliché မှဖြစ်ပါသည်။ Oxford dictionary နှင့် clichesite.com မှနမူနာတစ်ချို့လည်းပါပါသည်။ လေ့လာချင်သူများ သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။
Permalink Reply by Ratan Biswas on January 23, 2013 at 14:13
Permalink Reply by November Aye on January 23, 2013 at 14:53
Permalink Reply by Avirl Swift on January 23, 2013 at 15:08
Permalink Reply by Yin Min Myint Z∂w on January 23, 2013 at 17:47
Permalink Reply by Thi Nwe Cho on January 24, 2013 at 22:05
Thank you so much for your expressions!
Permalink Reply by အောင်အောင်ဦး on January 29, 2013 at 17:43
Permalink Reply by Htun Htun Soe on February 6, 2013 at 8:32
Permalink Reply by venus on September 18, 2013 at 9:14